Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် Tungsten စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအကြံပြုချက်များ ထုတ်လုပ်သူနှင့် Tungsten စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအကြံပြုချက်များ ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
Soar Technology Co., Ltd တွင်တည်ရှိသည် Taiwan။ ကျနော်တို့၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ရာတွင်ပါဝင်နေတဲ့ professional စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ Tungsten စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအကြံပြုချက်များ။ ကျနော်တို့အမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့စျေးကွက်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆောင်မှုအမိန့်ကိုကြိုဆိုကြသည်။ ကျနော်တို့ ပို. ပို. အတန်းမြင့်ထုတ်ကုန်များထူးချွန်ဝန်ဆောင်မှုဈေးအချိန်နှင့်တပြေးညီပေးပို့အပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့နိုင်ငံတကာစျေးကွက်ရှယ်ယာပိုမိုချဲ့ထွင်ကြသည်။ ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသည့်အချိန်တွင်မဆို။
အဖြိုက်နက်ကိုအပ်များကိုပတ်ပတ်လည်လှံတံအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်-ပုံသဏ္tာန်အရ tungsten ဆေးထိုးအပ်များနှင့်ပြတ်သော tungsten ဆေးထိုးအပ်များကိုပုံသဏ္accordingာန်အရသိရသည်.
လှံတံ-ပုံသွင်းထားသော Tungsten အပ်အပ်သည်ပါးလွှာသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်သတ္တုမျက်နှာပြင်တစ်ခုရှိသည်.argon arc ဂဟေလျှပ်ကူးအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်.Argon arc welding technology သည်မြန်ဆန်စွာကြီးထွားလာပြီးအများအားဖြင့်အိမ်တွင်းနှင့်ပြည်ပ၌ဂဟေဆော်သောနည်းပညာဖြစ်သည်.အထူးသဖြင့်,manual argon tungsten arc welding သည်အမျိုးမျိုးသောသတ္တုကိုယ်ထည်များအားဂဟေဆော်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်.
ဂဟေဆော်နေစဉ်,tungsten electrode နှင့် workpiece အကြား arc ကို arc ထုတ်လုပ်သည်,နှင့် Filler သတ္တုတစ်ဖက်ကနေတိုက်ကျွေးသည်.အဆိုပါ arc အပူ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုအောက်မှာ,Filler သတ္တုနှင့် workpiece သည်ဂဟေဆော်ရန်အတူတကွအရည်ပျော်သွားသည်.လျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၏အရည်ပျော်ခြင်းနှင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်အတွက်,ဂဟေလက်ရှိလွန်းမဖြစ်သင့်.ထို့ကြောင့်,tungsten argon arc welding သည်များသောအားဖြင့် ၄ မီလီမီတာအောက်ရှိပါးလွှာသောသံမဏိပြားများအားဂဟေဆော်ရန်သင့်လျော်သည်,ထိုကဲ့သို့သောပိုက်တင်းပါးအဆစ်အဖြစ်,ပိုက်နှင့်ပြွန်ပန်းကန်ဆက်သွယ်မှု.
ချွန်ထက်သောအစွန်အဖျားရှိအဖြိုက်နက်များကိုအဓိကအားဖြင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာများအတွက်အသုံးပြုသည်,ထိုကဲ့သို့သောဒစ်ဂျစ်တယ်လေးအဖြစ်-စုံစမ်းစစ်ဆေးစမ်းသပ်သူ,အရာ multi ကိုဖြစ်ပါတယ်-လေးသုံးပြီးရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံတိုင်းတာခြင်း device ကို-စုံစမ်းစစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်းနိယာမ.
ဒီတူရိယာကို National Crystal Silicon များအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုနည်းစနစ်များနှင့် American A ကိုရည်ညွှန်းသည်.S.တီ.M စံသတ်မှတ်ချက်.၎င်းသည်ခုခံမှုနှင့်စာရွက်ခုခံမှုကိုစမ်းသပ်ရန်အထူးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်(စာရွက်ခုခံ)Semiconductor ပစ္စည်းများဖြစ်သည်.
Tungsten ဆေးထိုးအပ်များကို semiconductor material factory များတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်,ဆီမီးကွန်ဒတ်တာစက်ရုံစက်ရုံများ,သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနအဖွဲ့အစည်းများ,နှင့်တက္ကသိုလ်များသည် semiconductor ပစ္စည်းများ၏ခုခံစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.probe-needles.com/my/tungsten-probe-tips.html
Tungsten စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအကြံပြုချက်များ ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။ Tungsten စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအကြံပြုချက်များ ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ချိသူ Tungsten စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအကြံပြုချက်များ ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan